Vaovao - Somary taraiky kely ny sehatry ny haitao fototra, mbola lavitra ny fitsanganan'ny indostrian'ny paompiko
Nandritra ny vanim-potoana iray, ny fampandrosoana ny indostrian'ny pump an'ny fireneko dia niroso tamin'ny fandrosoana. Natosiky ny politikam-pamokarana ankafizin'ny firenena, ny mizana indostrialy sy ny fenitra teknika dia nohatsaraina tamin'ny alàlan'ny fampidirana fomba maro toy ny fitrohana, fanavaozana ary fanovana, ary fandevonan-kanina sy fanavaozana. Manokana, ny haavon'ny vokatra manohana ny teknolojia sy ny paompy lehibe sasany dia nahatratra ny ambaratonga iraisam-pirenena.
Fantatra fa eo ambany fitarihan'ny fangatahan'ny tsena, ny vokatra paompy avo lenta ao amin'ny fireneko toy ny paompy avo lenta avo lenta miaraka amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina dia namorona fahaiza-manao fanohanana ampy ho an'ny sehatry ny herinaratra, metallurgy, petrochemicals, ary fiarovana ny tontolo iainana. Ary miaraka amin'ny fanavaozana ara-drafitra ny lafiny famatsiana sy ny fanatsarana ny sehatra teknikan'ny ankapobeny, ny tanjaka ankapobeny an'ny indostrian'ny paompiko dia nanenjana be ny banga amin'ireo firenena mandroso.
Taorian'ny nidirany tao amin'ny "Drafitra Dimy Dimy faha-13", dia nihazakazaka ny fampiharana ireo fotodrafitrasa lehibe momba ny injeniera, ary ny fitehirizana angovo sy ny fampihenana ny emission amin'ireo faritra manan-danja dia lasa iray amin'ireo ifantohan'ny asa. Ny adin'ny fiarovana ny lanitra manga, ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny fandotoana ny rano, ary ny fanaraha-maso ny vy mavesatra dia nandroso tamin'ny halalinany, ary ny fizotran'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso dia maloto tokoa. Ny maha-zava-dehibe ny indostrian'ny paompy dia miharihary.
Mampiseho ny angona fa ny haben'ny tsenan'ny indostrian'ny paompiko any amin'ny 2017 dia manodidina ny 170 miliara. Ny antontan'isa tsy feno dia mampiseho fa misy orinasa paompy 7000 manerana ny firenena ary orinasa maherin'ny 1.000 mihoatra ny habe voatondro. Miaraka amin'ny fanatsarana ny politika nasionaly sy ny eto an-toerana, dia tsy manaitra ny vinan'ny indostria.
Fandrosoana haingana, fiheverana malaza eran'izao tontolo izao, zava-bita miavaka… Ireo teny fiderana ireo dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny paompy eto amin'ny firenentsika, fa ao ambadiky ny voninkazo mamelana, misy ihany koa ny olana tsy azo odian-tsy hita.
Voalohany, be loatra ny isan'ireo SME. Amin'ny dingan'ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny paompy, ny orinasa paompy kely sy salantsalany ary ny orinasa paompy tsy miankina dia nipoitra tsirairay avy, ary mitana ampahany betsaka amin'ny totalin'ny orinasa paompy. Misy ny tsy fahampian'ny orinasa lehibe, ary ny marika sy ny votoatin'ny orinasa kely dia tsy matanjaka, izay tsy mahomby amin'ny fampandrosoana ankapobeny ny indostrian'ny paompy.
Faharoa, ambany ny fifantohan'ny tsena. Miaraka amin'ny fihenan'ny fangatahan'ny tsena sy ny famatsiana ampy, ny indostrian'ny paompin'ny fireneko dia mitohy matotra, fa ny tsena mahatratra 100 miliara yuan dia vonona handeha. Raha ampitahaina amin'ny haben'ny tsena goavana dia ambany ny fifantohana amin'ny tsena ary ny varotra isan-taona an'ny orinasa lehibe indrindra dia latsaky ny 10 miliara na latsaky ny 5 miliara aza. Noho izany, ilaina maika ny fampitomboana ny fifantohan'ny tsena.
Fahatelo, mifanaraka amin'ny torolàlana stratejika an'ny firenena amin'ny “fampidirana, fandevonan-kanina, fitrohana ary fanavaozana”, tena nahazo tombony kely tokoa ny indostrian'ny paompin'ny fireneko. Na izany aza, amin'ny tena fandidiana, orinasa marobe no mampiditra azy Misy vitsy aza, izay mahatonga ny fampiroboroboana ny indostrian'ny paompiko any anaty faribolana hafahafa. Tsy dia misy firy ireo teknolojia manana zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina.
Amin'ny ankapobeny, na dia nahatratra ny famokarana sy ny famokarana tsy miankina aza ny ankamaroan'ny sokajy vokatra ao amin'ny indostrian'ny paompin'ny fireneko, dia vitsy ny sokajy vokatra misy ny zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina, ary ny teknolojia fototra kosa dia eo am-pelatanan'ny firenena mandroso, ka ny orinasam-paompin'ny fireneko amin'ny toerana ambany ambany. Ankoatr'izay, noho ny lesoka tamin'ny fikarohana teknolojia fototra, taraiky ny fampandrosoana ny milina fototra sy ny singa fototra ao amin'ny indostrian'ny paompiko, izay lasa sakana lehibe amin'ny fampiroboroboana ny indostria, ary eo ihany koa ny risika fanesorana fahaizana efa lany andro. Noho izany, mbola lavitra ny làlan'ny indostrian'ny paompy. .